Ekoatora:Araha-maso ny kalitaon’ny gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2009 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Português, Español, English
Ratsy ny fifandraisana nisy teo amin’I Filoha Ekoatoriana Rafael Correa sy ireo mpampita vaovao ary ireo mpanao gazety ao amin’io firenena io. Mety ho ratsiratsy kokoa izany ato aoriana kely, araka ny voalazan’ny gazety La Hora [es], manana drafitra hampihatra ny lalàna Fampandraisana andraikitra ara-tsosialy ny haino aman-jery ny governemantany. Ho fanampin'ny teritery atao amin’ny dokam-barotra isan-karazany dia mety hitaky anjara fitenenana 15 minitra isan’andro ka hatramin’ny 70 minitra isan-kerinandro eny anivon'ireo fampitam-baovaom-bahoaka sy ny tsy miankina ny lalàna[es] (ilaina ny fisoratana anarana). Ireo tsikera no tena mampanahy mafy, indrindra fa ao anatin'ny vanimpotoana manakaiky fifidianana no nitsofoka izy ity.
Ny soso-kevitra, izay tokony hampiharin'ny Filan-kevi-pirenena misahana ny Haino aman-jery [es] (CONARTEL araka fanafohezana ny anarany avy amin’ny teny Espaniola), dia miantso koa fananganana komitin'ny mpanjifa izay afaka hanana zo hitaraina sy hiteny amin'ireo fandahàrana mandeha ka azo idirana mivantana. Mandeha ihany koa ny feo fa hoe ireo komity ireo dia ho afaka hirotsaka handray anjara amin’ny “famolavolana, ny fametrahana ary ny fanaovana jery todika ireny fandaharana ireny mba hahafahana mandrafitra fanakianana mitodika amin'ny fanabeazana ho an'ny mpampita vaovao sy ny mpanao gazety” ary izany rehetra izany dia mba ho fampandraisana andraikitra ny fampitam-baovao sy ny mpanao gazety amin’ny ampahany ihany.
Tao aorian’ny tatitra nivoaka an-gazety, dia nitsipaka ny fisian'izany soso-kevitra izany ny CORNARTEL[es]. Ndeha tsy ho jerena ny fanamafisana avy amin'ny gazety sy ny governemanta, izany rehetra izany dia nanokatra adihevitra momba ny kalitaon'ny asa fanaovan-gazety eto amin'ny firenena sy ny anjara raisin'izy ireny eo amin'ny kilalao politika.
Ny mpamaham-bolongana sasany mihevitra fa ny mpampita vaovao dia mila fitsipika arahana, toa an'i Muluncayense ao amin'ny Mi Diario Relativoy[es] izay manana fijery miiba momba ny mpanao gazety hoe tsy matihanina mihintsy izy ireo amin'ny fanatanterahany ny asany. Tanisainy amin'izany koa ny namoahan'ny fahitalavitra Ekoatoriana vaovao tsy mitombina momba ny vono-olona nahafaty ny namany akaiky be azy. Mifanipaka ny antsipirihan-baovao ary zavatra samihafa no lazain'ny gazety roa na telo momba ny tranga iray izay amin'ny ankapobeny, vaovao diso.
Etsy andaniny kosa, i Ruben Dario dia mihevitra ireo mpampita vaovao ho mitaiza loatra fifandraisana mitongilana any amin'ny ‘tombontsoan'ny ao ambony'[es]. Aty amparany dia niaro ny asany izy, izay efa voatsikera teo aloha, ary niaro manokana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety manadihady [investigative journalism] [es]:
Porofoin'i Ricardo Vasconcellos ao amin’ny Desde mi Trinchera [es] ny mahatonga ny mpanao gazety ao Ekoatora hisedra olana tsy ho afa-mamoaka vaovao tokana, fa eo koa ny fanambanian'ny governemantan’I Correas azy ireo.